Dredges ho an'ny famerenana amin'ny morontsiraka amoron-dranomasina sy ny famerenam-boron-dranomasina - Ellicott Dredges
Ny fananganana tany vaovao sy ny famerenana indray ny tanànan'ny tondradrano dia fahita manerana an'izao tontolo izao ho an'ny fampandrosoana ny trano sy ho fanarenana ireo faritra simba. Ny dredges an'i Ellicott dia ampiasaina amin'ny famonosana fasika sy ny rano shoreline miverina any amin'ny toerana misy azy.
Tsy misy misakana ny natiora tsy hisakafo any amin'ny torapasika sy ny morontsiraka. Ny fitrandrahana amoron-dranomasina dia mitranga amin'ny fihenan'ny fihodinan'ny rano, ny onja, ny onja, ary ny toetr'andro mihatra. Ireo torapasika izay naverina tamin'ny alàlan'ny dredging dia natao hiarovana ny vondron'olona ifotony amin'ny fahavoazana amin'ny rivo-piainana ary hitahiry ny valan-dranomasina fialamboly.
Raha tsy mitsaha-mitombo ny tsena eran-tany ary mihamaro hatrany ny olona mifindra monina sy mitsidika ireo toerana amoron-tsiraka akaiky toa an'i Apollo Bay, Melbourne, Australia, ary Matira Beach, Bora Bora mamorona filana lehibe amin'ny fananganana ny fitrandrahana tany.
Ny fizotry ny fanodinana ny tany dia misy ny fitrandrahana fasika, tanimanga, na vato avy amin'ny gorodona ary ny singa avy eo dia apetraka hamorona tany vaovao any an-toeran-kafa. Nandritra ny tantaran'i Ellicott dia nandray anjara tamin'ny tetikasa famokarana tany lehibe izahay izay nanampy tamin'ny fananganana ny Port of Los Angeles, Kalifornia (Etazonia) ary i Port Said, Cario, Egypt.
Ny mpifanolobodirindrina izay sisin-drano renirano dia mora ateraky ny tondra-drano isan-taona mandritra ny fotoanan'ny orana. Raha tsy mandeha tsara ny renirano na làlan-drano, dia mitombo tsikelikely ny fantsom-borona, ny feta sy ny serivisy ary hivoatra ny bottleneck. Rehefa misy ny orana lehibe, ny bottleneck dia mametra ny renirano, ny lakandrano, na làlan-drano, dia afaka manome rano mandeha mikoriana ary miakatra ny haavon'ny rano.
Ny tetik'asa fanondrahana rano sy ny fisorohana ny tondra-drano dia miasa mba hitazomana ny halalin'ny fantsona, ary ny hafa dia ampiasaina amin'ny fanalefahana ny tondra-drano. Ny tetikasa misy ifandraisany amin'ny rano dia mitaky ny fanesorana ireo fitaovana voaloto.
Series Series 460SL mitsoka Dragon® Dredge
Dredge & Dock Lehibe Lehibe dia mampiasa Dredge marika Ellicott® ho an'ny fiarovana an'i Keta any Ghana, Afrika